Lammiiwwan Itiyoophiyaa Jimaata Darbe Washington DCtti Hiriira Geggeessan
Hiriira mormii Waahingitan Diisii (suuraa faayilii)
Lammiiwwan Itiyoophiyaa fi dhalattoonni biyyattii US keessa jiraatan jimaata darbe Washington DC waajjira ministrii dhimma alaa fuulleetti hiriira kan geggeessan yoo ta’u, qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta’an Ayyuu- Birhaan Tizaazuu, kaayyoon hiriira kanaa inni ijoon dhiibbaan Yunaayitid Isteetisiin Itiyoophiyaa irra ga’aa jiru sirrii akka hin taane bal’inaan mul’isuuf akka ta’e ibsanii yaada itti aanu kennanii jiran.
Inni lammataa guyyaa guyyaa dhaan uggura Itiyooophiyaa irra kaa’amu bulchiinsa biyya kanaa, bulchiinsa Awrooppaa fi kanneen biroo dhaan uggura kaa’amu sirrii miti kan jedhu dubbachuuf yoo ta’u, inni sadaffaan immoo TPLFn badiin hagasii ennaa raawwatamu garuu oduu irratti yeroo mara ennaa dhageessu haalli Tigraay keessa jiru nu yaaddessa jedhama. Tigraay keessaa wal waraansi erga dhaabatee tureera. Waxabajjii 30 kaasee dachee Tigraay irra wal waraansi hin jiru. Biyyoonni kun hanga ammaatti TPLF irra uggura cimaa ennaa kaa’an arginee hin beeknu. Sadarkaa mootummaatti qixxee ol ba’ee biyya ka diigu waliin mariif gad taa’aa inni jedhus fudhatama hin qabu ka jedhu ibsuuf hiriira kana baane jedhan. #nomore ka jedhu kun panafricanizim sochooseera akkuma argitu. Burkinaafaasoo, Afriikaa kibbaa, yemen fi Afgaanistaan mara kan sossoosee dha jedhan.
Aadde Ayubirhaan sochii #nomore jedhuun kana booda hiika guddaa sadarkaa addunyaatti kan qabaatu ta’uu isaa ibsanii, jimaata darbe xalayaa mootummaa Yunaayitid Isteetis dhaqqabuu qaba jedhan kaayyoo ijoo hiriirichaa xalayaa of keessaa qabu galfachuu isaanii ibsaniiru. Ministrii dhimma alaa irraa bakka bu’an poostaa dhiyaate simatanii ennaa ol seenan argamaniiru.